Degidda Vantaa - InfoFinland
Magaalooyin > Vantaa > Nolosha Vantaa > Degidda Vantaa
Adeegyada kaa caawinaya la qabsashada dalka
Talabixinta luqadaha badan ee Vantaa
Ururada Vantaa waxay bixiyaan talabixin luqado badan ku baxda waxayna caawimaad ka geystaan la qabsashada. Waxaad heli kartaa hagitaanka xaaladaha nolol-maalmeedka ee kala duwan, sida tusaale ahaan kan:
lacagta kaalmada nolosha,
barashada afka Finnishka iyo
hiwaayadaha la xiriira.
Waxaad talabixinta ku heli kartaa af Finnish, Iswiidhish, Ingiriis, Ruush, Carabi, Faaris, Soomaali iyo luqado kale oo badan. Wakhtiyada adeegga iyo macluumaadyada xiriirka ee ururada Vantaa waxaad ka heleysaa bogagga magaalada Helsinki.
Talabixinta luqadaha badan ee VantaaFinnish
Adeegyada dadka dalka u soo guuray ee Vantaa waxaad ka heleysaa talooyinka la qabsashada, adeegyada sooshalka iyo caafimaadka iyo adeegyada magaalada iyo ururada. Haddii aad u baahato waxaad heli kartaa macluumaad ku saabsan tusaale ahaan codsashada kaalmooyinka Kelada, deegaanka degdeg ah iyo caawimaadda cuntada.
Macaamiil ayaad ka noqon kartaa, haddii mar dhow heshay sharciga deganaanshaha Vantaana aad u soo guurtay. Waxaa kale oo aad macaamiil ka noqonaysaa, haddii aad tahay qaxooti, dhibanaha ka ganacsiga dadka, qof da’ ah, naafo ah ama qaba jirro daba-dheeraatay, ama haddii aad xaq u leedahay sahmin horaadka.
Tel. xiriirinta telefoonka magaalada 09 83911